Isticmaalka bamboo waa hab fiican oo lagu qurxiyo gurigaaga.
Maanta waxaa jira siyaabo badan oo lagu qurxiyo guri leh alaab qalaad oo loogu talagalay naqshad gaar ah. Haddii aad doorbideysid qurxinta Aasiya ama Reer Galbeedka, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad adeegsato bamboo ama alaabta jiifka ah ama sagxadda dhulka si aad gurigaaga u siiso muuqaal iyo dareen u gaar ah. Xubin ka mid ah qoyska cawska, bamboo waa kayd dhuuban oo jilicsan oo ay reer Bariga u isticmaali jireen agabkooda guryo qarniyo badan. Rattan, dhanka kale, waa wax badan oo ka mid ah qaab dhismeedka geedka canabka ah, in kasta oo ay adag tahay. Waxay leedahay maqaar dibadda ah, oo ka duwan bamboo, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon alxanka ama isku xoqidda alaabta guriga iyo gogosha gogosha wada. Tani waa sababta macaamiisha badani maalmahan u codsadaan rattan halkii ay ka ahaan lahaayeen qalabka bamboo.
Bamboo wuxuu ka baxaa Aasiya, qaybo ka mid ah Afrika iyo Waqooyiga Ameerika, iyo waqooyiga Australia. Si kastaba ha noqotee, bamboo ama rattan midkoodna si weyn looma horumarin ujeeddooyin ganacsi. Weli waa cusub oo qiimo jaban, labadaba bamboo iyo rattan waxay ku daraan taabasho dhaqameed reer bari guri si taxaddar leh loo beeray. Waxaad ku bilaabi kartaa wax yar si aad u aragto sida aad u jeceshahay, ka dibna mar dambe ku dar waxyaabo badan si aad u soo koobto raaxada iyo quruxda naqshada gurigaaga iyo nidaamka qurxinta.
Roogagga Bamboo, gogosha, iyo sagxadda dhulka waxay bixiyaan aasaas aasaasi ah oo ka qiimo jaban roogga dharka lagu tolo. Si kastaba ha noqotee, dadka qaarkiis ma daryeesho muuqaalka ama muuqaalka agabkan. Si kastaba ha noqotee, gacmaha qurxinta si taxaddar leh iyo guri aan casriyeyn ahayn ahaanshaha-jiritaanka oo dhan, mid ayaa laga yaabaa inuu wax badan ku sameeyo labada sheyba si loo abuuro jawi raaxo leh, soo jiidasho leh oo badbaadin kara mawduucyada bariga. Maaddaama inta badan haweenka da'da yar iyo carruurtu ay goostaan ​​bamboo, adeegsiga alaabooyinkan waxay gacan ka geysaneysaa bixinta shaqo joogto ah iyo dakhli shaqsiyaadka ku lugta leh warshadaha.
Qol ka kooban alaabta waaweyn ee loo yaqaan 'rattan furniture' ayaa soo gudbiya aragti raaxo iyo qaab leh iyadoo la adeegsanayo qaab fudud oo qaab fudud iyo xishood leh. Dharka xariirta ah, dharka la tuuro, iyo waxyaabo kale oo dheeri ah oo lagu daro ayaa gacan ka geysanaya dhammaynta bandhigga farshaxanka Bariga iyo xariifnimada. Ka dukaamayso dukaammadii ugu dambeeyay ee shirkadaha iibka websaydhka oo bixiya xulasho ballaadhan oo ah bamboo iyo alaabooyinka rattan ee qiimaha tartanka. Ka taxaddar in iibsashada alaabta gurigaaga aysan ka hor imaanaynin waxyaabaha kale ee ku yaal aag la siiyay, ama runtii, guriga intiisa kale. Wax walba waa inay isku dubbaridaan oo keliya cabbirka, qaabka, iyo midabka, laakiin qurxinta, mawduuca, iyo dhadhanka. Halkii aad u isticmaali lahayd bamboo dartiis adoo adeegsanaya bamboo, raadso siyaabo aad uga dhigayso inay ku habboon tahay qalabkaaga halkii aad ku khasbi lahayd muuqaal ah in gurigaagu aanu diyaar u ahayn inuu dejiyo.